कांग्रेसमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्म रूपान्तरण आवश्यक छ : युवा नेता नवीनराज पौडेल | Safal Khabar
विहीबार, १० असार २०७८, १९ : १२
नेपाली कांग्रेस अहिले आगामी १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम देशैभरी डिजिटलाईजेलन बिधिबाट गरिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अहिले महाधिबेसन गर्ने पक्षमा प्रतिबद्द देखिन्छन् ।
अहिले नेतृत्वकै कारण कांग्रेस अप्ठेरोमा परेको र नेतृत्वले प्रभाव पर्नेगरी काम नगरेको आम गुनासो छ । शेरबहादुर देउबा सभापतिमा फेरि एकपटक दोहोरिन चाहान्छन् । उनि संगै उनकै पक्षका बिमलेन्द्र निधिलगायत एक दर्जन नेता सभापति बन्ने दौडमा छन् । यता चितवन काङ्रेस पनि निर्बाचनमा होमिएको छ । बेला बखत चर्चामा आउने जिल्ला चितवनमा अहिले सभापतिमा आधा दर्जन नेता सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरि जिल्ला दौडाहामा छन् ।
चितवन जिल्ला अहिले भने कम्युनिष्टहरुको हालीमुहाली र दबदबामा छ । नेपाली कांग्रेसले सम्पुर्ण चितवनवासीको मन जित्न सकेको छैन । कहिले कसलाई कहिले कसलाई भोट मागेर आफ्नो बर्चस्व भएको जिल्ला ध्वस्त पारेको आरोप कांगेसको केन्द्रलाई लागेको छ।आगामि महाधिवेशनपछि चितवन काङ्रेसको भविस्य कस्तो होला त ? पार्टीका एजेन्डा ,योजना भावी रणनीति कस्तो हुनुपर्छ ? कसरी लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा चितवन काङ्रेसका जिल्ला सदस्य युवा नेता संचारउद्यमी नवीनराज पौडेल सँग कुराकानी गरेका छौ प्रस्तुत छ, कांग्रेसको समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर पौडेलसँग गरेको कुराकानी ।
नेपाली कांग्रेसलाई महाधिवेशन लागेकै हो त ? तपाईंको भनाई के छ ?
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको गरमागर्मी सुरू भइसकेको छ । अब कोभिडको प्रभाव मत्थर भएसंँगै महाधिवेशन पनि तोकिएकै समयमा हुने बुझिएको छ। पार्टीमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम करिब करिब सकिएको छ तय भएकै मितिमा महाधिबेसन हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । महाधिवेशन समयमै हुने आशा छ ।
काँग्रेसको महाधिवेशन कस्तो स्वरूपमा होला नेताहरू मिल्ने कुरा पनि आएको छ ?
समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता सबै नेताहरुले गर्नुभएको छ । केन्द्रीय सभापतिको पनि छ । समयमै सम्पन्न गर्न कार्यतालिका समेत बनाइएको छ। तीन तहको संरचना अनुरुप अन्तरिम संरचना बनेको छ। त्यसैले स्वतः महाधिवेसन हुन्छ । हुनुपर्छ, नत्र कांग्रेसलाई संवैधानिक संकट पर्छ ।
नेतृत्वको होडबाजी छ दोस्रो पुस्ता ले नेतृत्व गर्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
अहिले मुलुकमा पार्टीको भूमिका अत्यन्तै कमजोर स्थितीमा छ। कार्यकर्ता धेरै चिन्तित छन् । अब महाधिवेशनको विकल्प छैन । पार्टी बिग्रिएको छ । लथालिंग भएको छ । त्यसैले यो पटक सहि नेतृत्व छनौट भयो भने फेरी काङ्रेस जरैदेखि बलियो हुन्छ । त्यसको लागि सभापति विवादरहित, निस्कलंकित, बैचारिक क्षमताको हुनुपर्छ ।
अहिले को अवस्थामा धेरै आकांक्षी छ्न्, सस्थापनको र इतर पक्षको एउटा एउटा उमेद्वार हुने सम्भावना के छ ?
अहिलेसम्म सबै प्रचारमा हुनुहुन्छ को नेता हुने वा को सभापति हुने भन्ने पछिको कुरा हो । को निर्वाचनमा सभापति लड्ने भन्ने त मनोनयन दर्ता गर्ने बेलामा मात्र थाहा हुन्छ । सभापितको आकांक्षीमा मात्रै आधा दर्जन नेताको नाम रहेको भन्ने सुनेको छु । अव आन्तरिक रुपमा छलफल भएपछि टुंगो लाग्ला । अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
तपाईंको विचारमा अबको कांँग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ?
अब कांग्रेसमा तल देखि माथिसम्म रूपान्तरण आबश्यक छ।रूपान्तरण संगै युबा र पाकाको फ्युजन पनि जरूरि छ ।बैचारिक र निष्ठाको अपमान भएको छ । अब बिचार सहित् गर्बिलो नेतृत्व सबैले सहज् स्विकार्ने खालको हुनुपर्दछ ।युबा युबा भनेर मात्र हुदैन बुढापाकाको अनुभब र युबाको जोश जॅागर मिलाएर राम्रो कांग्रेस बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ जिल्लादेखि केन्द्रसम्म । गुटउपगुटको अन्त्य गर्नुपर्छ । सबै नेता कार्यकर्ताको भावना बुझेर पार्टीमा योगदान दिएका, पार्टीप्रति समर्पित र निष्ठावान भएका व्यक्तिलाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
तपाईंको पनि चितवन काङ्रेसमा धेरै चर्चा बढेको छ कुन पदमा चुनाब लड्नुहुन्छ ?
धेरै वर्ष पार्टीको केन्द्रिय प्रचार विभाग र संचार समन्वय्मा काम गरें । अहिले जिल्ला सदस्य छु अब जिल्लाभरिका साथीभाईको चाहना बुझेर जिल्ला समितिको पदाधिकारी बन्ने प्रयासमा छु । जिल्ला सचिवमा मेरो दावी रहेको छ । हेरौं समयले कत्तिको साथ दिन्छ । साथीभाईसँग परामर्शमा छु ।